Dowladda Mareykanka Oo Farriin Hanjabaad U Dirtay Saraakiisha Milateriga Suudaan | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda Mareykanka Oo Farriin Hanjabaad U Dirtay Saraakiisha Milateriga Suudaan
Dowladda Mareykanka Oo Farriin Hanjabaad U Dirtay Saraakiisha Milateriga Suudaan
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonty Blinken ayaa sheegay iney Washington diyaar u tahay iney tallaabbo ka qaadayo saraakiisha ciidamada Suudaan ee hortaagan in talada dalka lagu soo celiyo dowlad rayad ah.
Blinken wuxuu sheegay saraakiisha ciidamada ugu sarreeya haddii ay rabitaanka shacabka Suudaan ay meel marin waayaan ay cawaaqib xumo la kulmayaan.
“Ma rabno inaan wixi hore dib ugu laabanno, waxaanna diyaar u nahay in aan u jawaabno kuwa doonaya in ay hor istaagaan himilooyinka shacabka Suudaan ee ah in la helo dowlad rayid ah oo dimuqraadi ah oo u istaagta isla xisaabtanka, cadaaladda iyo nabadda” ayuu yiri.
Labadi bilood ee la soo dhaafay Mareykanka wuxuu soo saarayey baaqyo ka aaddan inuu ka soo horjeedo afgambiga militari ee ka dhacay dalka Suudaan.
Dowladda Militariga ee Suudaan waxay maanta jareen adeegga internetka iyada oo maanta markale la qorsheynayo inuu dalka Suudaan uu ka dhaco mudaharaad kale oo lagu dalbanayo iney ciidamadu talada dalka wareejiyaan.
Dowladda Mareykanka Oo Farriin Hanjabaad U Dirtay Saraakiisha Milateriga Suudaan was last modified: January 2nd, 2022 by Admin
Maamulka Puntland oo War kasoo saartay dagaal dhexmaray labada Maleeshiyo Beelood
Madaxweynaha Koofur galbeed oo ku wajahan Baraawe
Sawirro: DF oo maanta xariga ka jartay xarumo iyo waddooyin dib loo dayac tiray